ဆောင်းပါး > တရားဒေသနာ > ငါ့ရဲ့အထောက်အထားအသစ်
ပင်တေကုတ္တေပွဲ၏အဓိပ္ပါယ်ရှိသောပွဲတော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အားပထမဆုံးခရစ်ယာန်ဘုရားကျောင်းအားသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်တံဆိပ်ခတ်ထားသည်။ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်သည်ထို အချိန်မှစ၍ ယုံကြည်သူများအားကျွန်ုပ်တို့အားအမှန်တကယ်သစ်အမှတ်သညာတစ်ခုပေးခဲ့သည်။ ဒီနေ့ဒီအထောက်အထားသစ်အကြောင်းငါပြောနေတယ်။
လူအချို့ကသူတို့ကိုယ်သူတို့မေးကြတယ်၊ ဘုရားသခင်ရဲ့အသံ၊ ယေရှုရဲ့အသံ၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့သက်သေခံချက်ကိုငါကြားနိုင်လား။ ရောမမှာအဖြေကိုငါတို့တွေ့တယ်။
«Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsstet; sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen: Abba, lieber Vater! Der Geist Gottes selbst gibt Zeugnis unserm menschlichen Geist, dass wir Gottes Kinder sind» (Römer 8,15-16) ။
«Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn; als Mann und Frau schuf er sie» (1. ကြွက် 1,27 SLT).
ဘုရားသခင်သည်အာဒံကိုဖန်ဆင်းခဲ့သကဲ့သို့၊ သူ၏ပုံသဏ္,န်၊ ထူးခြား၊ ထူးခြားမှုရှိခဲ့သည်။ သူ၏မူလအမှတ်အသားကသူ့ကိုဘုရားသခင်၏ကလေးတစ် ဦး အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ ထို့ကြောင့်သူက“ အဗ္ဗ၊ ချစ်လှစွာသောအဘ” ဟုဘုရားသခင်ကိုပြောနိုင်သည်။
ဒါပေမယ့်ငါတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝတို့ရဲ့ခြေရာကိုငါတို့လိုက်ခဲ့တယ်။ ပထမအာဒံနှင့်သူ့နောက်မှလူသားအားလုံးသည်ဤလိမ်ညာလှည့်ဖြားသူ၊ စာတန်၏ဖခင်ဖြစ်သောဝိညာဉ်ရေးရာလက္ခဏာကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ဤအမှတ်အသားခိုးယူမှု၏ရလဒ်အနေနှင့်လူသားအားလုံးသည်၎င်းတို့အားခွဲခြားသိမြင်နိုင်သောအမှတ်အသားကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ အာဒံနှင့်ငါတို့သည်ဘုရားသခင်နှင့်တူသောဘုရားသခင့်ပုံသဏ္ဌာန်၊ ဝိညာဏဝိသေသလက္ခဏာနှင့်အသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
ထို့ကြောင့်အာဒံနှင့်ကျွန်ုပ်တို့မှသူ၏သားစဉ်မြေးဆက်တို့သည်သူ၏အသံကိုနားမထောင်သောအခါဘုရားသခင်မှာထားတော်မူသောအပြစ်ဒဏ်၊ သေခြင်းသည်ငါတို့နှင့်လည်းသက်ဆိုင်သည်ကိုငါတို့မြင်သည်။ အပြစ်နှင့်၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှု၊ သေခြင်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏မြင့်မြတ်သောဝိသေသလက္ခဏာကိုကျွန်ုပ်တို့လုယက်ခဲ့သည်။
«Adam war 130 Jahre alt und zeugte einen Sohn, ihm gleich und nach seinem Bilde, und nannte ihn Set» (1. ကြွက် 5,3).
ဘုရားသခင်သည်သူ၏ပုံသဏ္lostန်ကိုဆုံးရှုံးခဲ့သောသူ၏ဖခင်အာဒံနောက်တွင် Set ကိုဖန်တီးခဲ့သည်။ အာဒံနှင့်ဘိုးဘေးများသည်အလွန်အသက်ကြီးလာသော်လည်း၎င်းတို့အားလုံးသေဆုံးပြီးသူတို့နှင့်အတူယနေ့တိုင်ရှိနေခဲ့သည်။ အားလုံးအသက်နှင့်ဘုရားသခင်၏ဝိညာဉ်ရေးသဏ္ာန်ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ဝိညာဉ်၌ဘ ၀ သစ်ကိုလက်ခံရရှိမှသာလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အပန်းဖြေပြီးဘုရားသခင့်ပုံသဏ္ာန်သို့ပြောင်းလဲသွားလိမ့်မည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ဘုရားသခင်ရည်ရွယ်တော်မူသောဝိညာဏဝိသေသလက္ခဏာကိုပြန်လည်ရရှိသည်။
«Lügt einander nicht an, da ihr ja den alten Menschen ausgezogen habt mit seinen Handlungen und den neuen angezogen habt, der erneuert wird zur Erkenntnis, nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat» (Kolosser 3,9-10 SLTS)။
ငါတို့ကယေရှုနောက်ကိုလိုက်နေတာကြောင့်ငါတို့လိမ်ချင်တဲ့မေးခွန်းမရှိဘူး။ ထို့ကြောင့်ဤအခန်းငယ်နှစ်ခုသည်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရှေးလူသားများ၏သဘောသဘာဝကိုဆွဲထုတ်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားယေရှုနှင့်လက်ဝါးကပ်တိုင်၌တင်ကာယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအားဖြင့်ဘုရားသခင့်သဘာဝကို ၀ တ်ဆင်ထားသည်။ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်သည်ငါတို့၏ယေရှုပုံသဏ္န်၌အသစ်ပြုပြင်ခြင်းခံရကြောင်းငါတို့ဝိညာဉ်များကိုသက်သေခံသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ကိုခေါ်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်တံဆိပ်ခတ်သည်။ အသစ်သောဖန်တီးမှုတစ်ခုအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ဝိညာဉ်၌ခရစ်တော်ကဲ့သို့နေထိုင်ပြီးဘုရားသခင်ကဲ့သို့သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စွာနေထိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အမှတ်သညာအသစ်သည်အမှန်တရား၌အသစ်ပြန်လည်ဖြစ်ပေါ်ပြီးအမှန်တရားသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအမှန်တကယ်စိတ်နှလုံး၌ရှိသည်ဟုပြောထားသည်။ ဘုရားသခင်နှင့်ချစ်သောသား၊ သမီးတို့သည်သား ဦး ယေရှုနှင့်အတူရှိကြလော့။
ကျွန်ုပ်တို့၏ပြန်လည်မွေးဖွားမှုသည်လူသားတို့၏နားလည်မှုကိုဇောက်ထိုးပြောင်းစေသည်။ ဤပြန်လည်မွေးဖွားမှုသည်နိကောဒင်အားသူ၏အတွေးတွင်သိမ်းပိုက်ထားပြီးယေရှုအားမေးခွန်းများမေးရန်အားပေးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခူကောင်တစ်ကောင်ကဲ့သို့ဆွဲထားပြီးနောက်သစ်သားသေတ္တာပေါ်တွင်ဇောက်ထိုးကဲ့သို့ပိုးကောင်တစ်ကောင်ကိုဆွဲထားသည်။ ငါတို့ရဲ့အသားအရေဟောင်းတွေကမသင့်လျော်ဘဲတင်းကျပ်လွန်းတာကိုငါတို့တွေ့ကြုံခံစားရတယ်။ လူသားတစ် ဦး ကျိုင်းကောင်၊ အရုပ်နှင့်ပိုးအိမ်တို့ကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်သဘာဝပြောင်းလဲနေသောအခန်းတစ်ခုနှင့်တူသည်။ ၎င်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ခူကောင်တစ်ကောင်အားနူးညံ့သောလိပ်ပြာတစ်ကောင် (သို့) လူ့သဘာဝမှဘုရားသခင့်ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာ၊ မြင့်မြတ်သောဝိသေသလက္ခဏာဖြင့်ပြောင်းလဲသည်။
ဤအရာသည်ယေရှုအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းတွင်ဖြစ်ပျက်သောအရာဖြစ်သည်။ ဒါဟာအသစ်တစ်ခုစတင်ခြင်းပါပဲ။ အဟောင်းကိုစနစ်တကျ ထား၍ မရပါ၊ ၎င်းကိုလုံးဝအစားထိုးနိုင်သည်။ အဟောင်းကလုံးဝပျောက်သွားပြီးအသစ်ကရောက်လာတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်၏ ၀ ိညာဉ်ပုံသဏ္ဌာန်ဖြင့်တစ်ဖန်မွေးဖွားခြင်းခံရသည်။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ကြုံရသည့်အံ့ဖွယ်အမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးယေရှုနှင့်အတူဆင်နွှဲသည်။
«Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur; das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden.» (2. ကောရိန္သု 5,1).
«Denn ihr seid gestorben, als Christus starb, und euer wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Wenn Christus, der euer Leben ist, der ganzen Welt bekannt werden wird, dann wird auch sichtbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt» (Kolosser 3,3-၁၀ NLB)။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ခရစ်တော်နှင့်အတူရှိသည်၊ ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကိုဖုံးလွှမ်း။ သူ့၌ဝှက်ထားသည်။
«Wer aber dem Herrn anhängt, der ist ein Geist mit ihm» (1. ကောရိန္သု 6,17).
ဘုရားသခင်၏နှုတ်တော်မှဤကဲ့သို့စကားများကြားရခြင်းသည်အလွန်ဝမ်းမြောက်ခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ကငါတို့ကိုဘယ်မှာမှရှာလို့မရတဲ့အဆက်မပြတ်အားပေးမှု၊ နှစ်သိမ့်မှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုပေးတယ်။ ဤစကားများသည်သတင်းကောင်းကိုကြွေးကြော်သည်။ အမှန်တရားကငါတို့ရဲ့အမှတ်သညာအသစ်ကိုဖော်ပြတဲ့အရာကိုအမှန်အတိုင်းကောက်ချက်ချတဲ့အတွက်ငါတို့အသက်တွေကိုအရမ်းတန်ဖိုးရှိတယ်။
«Und wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat: Gott ist Liebe; und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm (1. ဂျိုဟန် 4,16).
ဘုရားသခင်သည်ရက်ရောသည်။ သူ၏သဘောသဘာဝကသူသည်ပျော်ရွှင်သောပေးသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အားကြွယ်ဝသောလက်ဆောင်များပေးသည်။
«Sondern wir reden von der Weisheit Gottes, die im Geheimnis verborgen ist, die Gott vorherbestimmt hat vor aller Zeit zu unserer Herrlichkeit; Sondern es ist gekommen, wie geschrieben steht (Jesaja 64,3): Was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und in keines Menschen Herz gekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat es Gott offenbart durch den Geist; denn der Geist erforscht alle Dinge, auch die Tiefen Gottes» (1. ကောရိန္သု 2,7; ၇-၁၀)။
ငါတို့ကဒီအမှန်တရားကိုလူသားဥာဏ်ပညာနဲ့နှိမ်ဖို့ကြိုးစားရင်အရမ်းဝမ်းနည်းစရာကောင်းလိမ့်မယ်။ ငါတို့အတွက်ယေရှုပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကြီးမားတဲ့အရာတွေကငါတို့ကိုနှိမ့်ချပြီးနားလည်မှုလွဲတဲ့နှိမ့်ချမှုနဲ့ဘယ်တော့မှနှိမ့်ချသင့်တာမဟုတ်ဘူး။ ဘုရားသခင်ရဲ့ဥာဏ်ပညာနဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုနားလည်ပြီးလက်ခံဖို့နဲ့ဒီအတွေ့အကြုံကိုအခြားသူတွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းဖို့ကငါတို့အပေါ်မှာမူတည်တယ်။ ယေရှုသည်သူ၏ယဇ်နှင့်ငါတို့ကိုအလွန်ချစ်တော်မူ၏။ အမှတ်သညာအသစ်ဖြင့်သူသည်အ ၀ တ်အစားကဲ့သို့သူ၏ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းခြင်းကိုငါတို့အားပေးခဲ့သည်။
«Er, Gott, hat es aber gefügt, dass ihr in Christus Jesus seid, der unsere Weisheit wurde, dank Gott, unsere Gerechtigkeit und Heiligung und Erlösung» (1. ကောရိန္သု 1,30 Zürcher Bibel)
ကျွန်ုပ်တို့ရွေးနှုတ်ခြင်း၊ တရားမျှတခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းစေခြင်းကဲ့သို့သောစကားများသည်ကျွန်ုပ်တို့၏နှုတ်ဖျားမှအလွယ်တကူဖြတ်သွားနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်ရွေးနှုတ်ခံရဖို့ကမခက်ခဲပါဘူး၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းနဲ့သန့်ရှင်းခြင်းကိုလက်ခံဖို့ငါတို့အတွက်ခက်ခဲတယ်၊ မဆိုင်းမတွဘဲ။ ဒါကြောင့်ငါတို့ပြောမယ်၊ ဟုတ်ပါတယ်၊ ခရစ်တော်၌၎င်း၊ ငါတို့ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းသည်ဝေးလံသောဖြောင့်မတ်ခြင်းသို့မဟုတ်သန့်ရှင်းခြင်းအကြောင်းဟုဆိုလိုသည်၊ သို့သော်တိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ရှိဘ ၀ ကိုတိုက်ရိုက်ရည်ညွှန်းခြင်းမဟုတ်ပါ။
ကျေးဇူးပြု၍ ယေရှုသည်သင့်အတွက်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်သောအခါသင်မည်မျှဖြောင့်မတ်မည်ကိုစဉ်းစားပါ။ ယေရှုသည်သင်၏သန့်ရှင်းခြင်းဖြစ်လာသောအခါသင်မည်မျှသန့်ရှင်းသနည်း။ ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ဤအရည်အသွေးများရှိသည်။
ငါတို့သည်လက်ဝါးကပ်တိုင်မှာအသေခံ၊ မြှုပ်နှံပြီးယေရှုနှင့်အတူဘဝသစ်သို့ထမြောက်ခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့်ဘုရားသခင်ကကျွန်ုပ်တို့အားရွေးနှုတ်ခြင်း၊ ဖြောင့်မတ်ခြင်းနှင့်သန့်ရှင်းခြင်းကိုခေါ်တော်မူသည်။ သူသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖြစ်တည်မှု၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်လက္ခဏာကိုဖော်ပြရန်၎င်းကိုသုံးသည်။ ဒါကမင်းလက်ထဲမှာ ID အသစ်တစ်ခုရှိရုံနဲ့မင်းမိသားစုရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရုံဘဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်သည်သူနှင့်တစ်သားတည်းဖြစ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့နားလည်နိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်သူ၏ပုံသဏ္ာန်နှင့်တူသည်။ ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဖြောင့်မတ်သန့်ရှင်းသည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မြင်သည်။ တစ်ဖန်၊ ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ကိုယေရှုအားသူ၏သား၊ သမီးကဲ့သို့ငါတို့ကဲ့သို့မြင်တော်မူသည်။
သခင်ယေရှုကသင့်အား“ ငါ့နိုင်ငံတော်မှာမင်းနဲ့အတူအမြဲရှိဖို့ကြိုတင်ကာကွယ်မှုတွေအားလုံးကိုငါလုပ်ထားတယ်။ မင်းကငါ့ဒဏ်ရာတွေကိုသက်သာစေတယ်။ သင်ထာဝရခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရသည်။ ငါမင်းရဲ့ကျေးဇူးနဲ့ငါရေချိုးခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်မင်းကကိုယ့်အတွက်အသက်မရှင်တော့ဘူး၊ ငါ့အတွက်နဲ့ငါ့ရဲ့ဖန်တီးမှုအသစ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေနဲ့။ မှန်ပါတယ်၊ မင်းကငါ့ကိုတကယ်သိလာတဲ့အခါအသစ်ပြုပြင်နေတုန်းဘဲ၊ ဒါပေမယ့်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းပြောရရင်မင်းကမင်းထက်အခုအသစ်မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ မင်းကကြီးပြင်းလာပြီးငါနဲ့အတူရှိနေခဲ့တဲ့အပေါ်ကအရာတွေကိုမင်းရဲ့စိတ်ကူးတွေကိုညွှန်ကြားတာငါပျော်တယ်။
မင်းကငါ့ရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့အသက်တာကိုဖော်ပြဖို့မင်းကိုဖန်တီးခဲ့တာ။ မင်းရဲ့ဘဝသစ်ကငါ့ကိုလုံခြုံစွာဝှက်ထားတယ်။ မင်းအတွက်ငါ့အတွက်လိုအပ်နေတဲ့အရာအားလုံးနဲ့ငါ့ရဲ့အံသြမှုတွေကိုငါတပ်ဆင်ပေးခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်၏ကြင်နာမှုနှင့်စိတ်ကောင်းစေတနာဖြင့်ကျွန်ုပ်အားကျွန်ုပ်၏မြင့်မြတ်သောသဏ္ာန်ကိုမျှဝေခွင့်ပြုလိုက်သည်။ မင်းကငါ့ဆီကနေမွေးဖွားလာကတည်းကငါ့ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကမင်းဆီမှာရှိနေတယ်။ ငါ့ဝိညာဉ်ကမင်းရဲ့စစ်မှန်တဲ့အထောက်အထားကိုမင်းသက်သေခံတဲ့အတိုင်းနားထောင်ပါ။
ငါကြားဖူးသောဧဝံဂေလိတရားအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်၊ ယေရှု၊ မင်းကငါ့ရဲ့အပြစ်အားလုံးကိုခွင့်လွှတ်ပေးပြီးပြီ။ မင်းကငါ့ကိုအပြင်မှာအသစ်လုပ်ခဲ့တယ်။ မင်းကမင်းရဲ့နယ်ပယ်ကိုတိုက်ရိုက် ၀ င်ရောက်နိုင်တဲ့အထောက်အထားအသစ်တစ်ခုကိုငါ့ကိုပေးခဲ့တယ်။ မင်းကငါတကယ်နေနိုင်ဖို့အတွက်မင်းရဲ့ဘ ၀ မှာဝေစုတစ်ခုပေးခဲ့တယ်။ ငါကငါ့ရဲ့အတွေးတွေကိုအမှန်တရားပေါ်မှာအာရုံစိုက်ပေးနိုင်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ငါဒီလိုပုံစံနဲ့နေရတာမင်းရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုငါ့ဆီကတစ်ဆင့်ပိုမြင်သာလာစေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒီနေ့ငါ့ဘဝမှာကောင်းကင်မျှော်လင့်ချက်တစ်ခုနဲ့မင်းကိုကောင်းကင်အသက်ပေးပြီးသားပါ။ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်၊ ယေရှု